Avy any Farafangana hihazo an’i Vangaindrano: minibus latsaka tanaty rano, mpandeha fito indray maty | NewsMada
Nisehoana lozam-piarakodia mahatsiravina indray tany Farafangana ny asabotsy teo. Tapaka hisatra ny taksiborosy Mazda iray, nifandona tamina Sprinter, avy eo, latsaka tany anaty rano. Vokany, mpandeha enina maty teo no ho eo. Tsy tana ihany koa ny ain’ilay naratra iray…
Enina ireo fantatra fa namoy ny ainy teo no ho eo! Nisehoana loza nahatsiravina ny asabotsy teo tokony tamin’ny 2 ora tolakandro, tany amin’ny 43 km miala an’i Farafangana, lalana mihazo an’i Vangaindrano. Tapaka hisatra ny fiara minibus Mazda iray nitondra mpandeha 16 ka niezaka nandefa ny fiara teny amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra ny mpamily rehefa tsy nahatafajanona azy. Lalana ifandimbiasana ilay tetezana ary efa nisy fiara Sprinter avy any Vangaindrano tafiditra aloha ka nifandona tamin’ilay taksiborosy, araka fanazavan’ny contrôleur general de la Police, Ramananandro Gabriel, talem-paritra misahana ny filaminam-bahoaka ao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana.
Vokany, nivarina tao anaty rano ilay taksibrosy ka tsy tafavoaka velona ireo mpandeha enina. Nahitana vehivavy iray nitondra vohoka, lehilahy telo ary vehivavy telo hafa. Araka ny fantatra, nisy mpivady amin’ireo mpandeha namoy ny ainy raha naratra ny sisa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalin’i Farafangana ankehitriny. Tsy nisy naninona kosa ireo mpamily roa tonta.
Nambaran’ny loharanom-baovao tamin’ny antso an-tariby, omaly hariva, fa namoy ny ainy ihany koa ny mpandeha iray tao amin’ilay taksiborosy vokatry ny ratra mafy nahazo azy raha tsy nisy naninona kosa ireo mpandeha tao amin’ilay Sprinter. «Tazomina eny amin’ny borigadin’ny zandarimaria ao Farafangana ny mpamily ireo fiara roa ireo ary hatao fanadihadiana rehefa natao ny fizahazahana ny loza », hoy ny hatrany ny fanazavana.
Lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona hafa ihany koa ny nitranga tany Antsiranana, ny faran’ny herinandro teo. Lehilahy iray mpanamboatra vata fampangatsiahana ao Antsiranana teo amin’ny faritra Sarimasina no maty tsy tra-drano ny alin’ny asabotsy teo manodidina ny tamin’ny 10 ora, rehefa nodomina fiara Mazda mpitatitra. Araka ny loharanom-baovao, samy nandeha mafy izy roa ireo tamin’io alina io. Fantatra fa nandositra avy hatrany ilay taksibrosy mampitohy an’Antsiranana amin’ireo distrika manodidina taorian’ny tranga ary tsy fantatra ihany koa ny laharan’ny fiara. Raha ny nambaran’ny loharanom-baovao, mbola tsy mahatsiaro tena ao amin’ny hopitalin’Antsiranana ilay naman’ilay maty tamin’ity loza ity.